V -Neck Zipper Lace Sleeve Faux Leather Bodycon Mini Dress ကို ၀ ယ်ပါ၊ ပို့ဆောင်ခအခမဲ့၊ အခွန်မပါပါ WoopShop®
V-Neck Zipper Lace Sleeve Faux Leather Bodycon Mini Dress ဖြစ်သည်
Farbe စိမ်းလန်းသော Claret ဇာစွပ် Blau အနက်ရောင်လက်
gross S M L XL XXL XXXL 4XL 5XL
မှစ. သင်္ဘောများ တရုတ်
အစိမ်းရောင် / S / တရုတ် အစိမ်းရောင် / ကျား / တရုတ် အစိမ်း / L / တရုတ် အစိမ်း / XL / တရုတ် အစိမ်း / XXL / တရုတ် အစိမ်း / XXXL / တရုတ် အစိမ်း / 4XL / တရုတ် အစိမ်း / 5XL / တရုတ် Claret/S/China Claret / M / CHINA Claret / L / တရုတ် Claret / XL / တရုတ် Claret / XXL / တရုတ် Claret / XXXL / တရုတ် Claret / 4XL / တရုတ် Claret / 5XL / တရုတ် ဇာလက်စွပ် / S / CHINA ဇာစွပ် / ကျား / တရုတ် ဇာစွပ် / L / CHINA ဇာလက်စွပ် / XL / တရုတ် ဇာလက်စွပ် / XXL / တရုတ် ဇာလက်စွပ် / XXXL / တရုတ် ဇာလက်စွပ် / 4XL / CHINA ဇာလက်စွပ် / 5XL / CHINA Blau/S/China Blau/M/China Blau / L / တရုတ် Blau / XL / တရုတ် Blau / XXL / တရုတ် Blau / XXXL / တရုတ် Blau / 4XL / တရုတ် Blau / 5XL / တရုတ် အနက်ရောင်လက်စွပ် / S / CHINA အနက်ရောင်လက်စွပ် / ကျား / မတရုတ် အနက်ရောင်လက်စွပ် / L / CHINA အနက်ရောင်လက်စွပ် / XL / တရုတ် အနက်ရောင်လက်စွပ် / XXL / တရုတ် အနက်ရောင်လက်စွပ် / XXXL / တရုတ် အနက်ရောင်လက်စွပ် / 4XL / တရုတ် အနက်ရောင်လက်စွပ် / 5XL / တရုတ်
V -Neck Zipper Lace Sleeve Faux Leather Bodycon Mini Dress - အစိမ်း / S / CHINA backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပစ္စည်း: PU၊ ထိုးဇါ
အသက်အရွယ်: အသက် ၁၈-၃၅ နှစ်
ပစ္စည်းရေးစပ်သီကုံး: ဒြပ် Fiber
91 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
ငါ 5xl ကိုမှာခဲ့ပေမယ့် 4xl ရခဲ့တယ်